ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့တစ်ခုတွင်ပွဲ ဦး ထွက်နိုင်မည့် K-Pop Idol ၁၂ ယောက် ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးလ်
K-Pop ပရိတ်သတ်များသည်သူတို့၏ idols များကိုသူတို့အဖွဲ့များတွင်နေထိုင်ကြသည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုအခြားအဖွဲ့များတွင်တွေ့ရခြင်းသည်ထူးဆန်းသည်။ ဒီ K-Pop သင်တန်းသားတွေကနာမည်ကြီးတွေကိုမတူညီတဲ့အုပ်စုတစ်ခုထဲတင်မဟုတ်ဘဲအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပါအဆုံးသတ်လုနီးဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်။ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့အားလုံးရဲ့ဘဝကခြားနားသွားလိမ့်မယ်။ ဒီလူ ၁၂ ယောက်မှာသူတို့တွေအရင်တုန်းကဘဝတွေမတူခဲ့ဖူးတာတွေကိုကြည့်ရအောင်။
၁။ အယ်လန် (CRAVITY)
Allen သည် CRAVITY အဖွဲ့၏ main dancer နှင့် lead rapper ဖြစ်သော်လည်းသူနှင့်အတူမနေခဲ့ပေ။ Starship ဖျော်ဖြေရေး! ၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၈ အထိသူသည်သင်တန်းသားအဖြစ်အလုပ်များခဲ့သည် JYP Entertainment ကနှင့်ပါ ၀ င်ပါဝင်သင့်သည် Stray Kids Survival Show ဒါကသူအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် သွေကလေးများ! ဒါပေမယ့်သူကပထမဇာတ်လမ်းတွဲမတိုင်ခင်မှာအစားထိုးခံရပြီး Starship Entertainment ကိုသွားပြီး CRAVITY နဲ့ပွဲ ဦး ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူသည် Stray Kids ကဲ့သို့သောအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရင်းနှီးနေဆဲဖြစ်သည် ဘန်ချန်း ယနေ့ထိတိုင်
S.Coups သည် SEVENTEEN အဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်၊ အဓိကရက်ပ်ပါနှင့်တေးသံရှင်ခွဲဖြစ်သော်လည်းသူသည်အခြားအဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်ရည်မှန်းထားသည်။ Pledis ဖျော်ဖြေရေး အစား သူက ၂၀၁၂ မှာ NU'EST နဲ့ပွဲ ဦး ထွက်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမယ့်အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် SEVENTEEN နဲ့ပွဲ ဦး ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ SEVENTEEN အဖွဲ့ဝင်နှင့်အတူ Wooziသူတို့နှစ် ဦး စလုံးကကုမ္ပဏီမှာအရှည်ကြာဆုံးသင်တန်းသားဖြစ်ခဲ့ပြီး Pledis Entertainment မှာ ၆ နှစ်ကြာအောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ မှာပွဲ ဦး ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
၃။ Jisoo (BLACKPINK)
Jisoo ဟာ BLACKPINK ရဲ့လှပတဲ့တေးသံရှင်နဲ့အမြင်အာရုံရှိသူဖြစ်ပေမယ့်သူမဟာအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အဖြစ်အဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား။ အနီရောင်ကတ္တီပါ? သူမမှာလေ့ကျင့်ခဲ့သည် YG Entertainment က သူမစူးစမ်းလေ့လာခံရတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ BLACKPINK နဲ့ debut လုပ်ဖို့ SM Entertainment က YG Entertainment နှင့်ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုတက်နေစဉ် သူမဟာ BLACKPINK မှာ trainee မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် SM Entertainment ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံပြီး SM Entertainment မှာတတိယမြောက်တတိယမြောက်မိန်းကလေးအဖွဲ့အဖြစ်အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်လို့သူမကပြောခဲ့ပါတယ်။
BTS ရဲ့ main dancer, sub-rapper နဲ့ vocalist J-Hope တို့ဟာ JYP Entertainment မှာသင်တန်းသားအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ကုမ္ပဏီထဲကတစ်ယောက်ကသူ့ကိုငြင်းပယ်ပြီး BigHit Entertainment နဲ့ပူးပေါင်းပြီး BTS အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပွဲ ဦး ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ SM Entertainment မှာသူမငြင်းပယ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် GOT7 အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အဖြစ်ပွဲ ဦး ထွက်နိုင်လိမ့်မယ်။
၅။ Taemin (SHINee)
Taemin သည် SHINee ၏ပါရမီရှင်အကမျိုးစုံ၊ အဓိကတေးသံရှင်၊ maknae ။ SHINee ၏အသက်အငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သောကြောင့်သူသည်“ ငယ်ရည်းစား” အယူအဆနှင့်ပွဲ ဦး ထွက်ရန်စိတ်ကူးကြောင့်စိတ်ရှုပ်ပြီးကြောက်လန့်နေခဲ့သည်။ သူက EXO နဲ့ပွဲ ဦး ထွက်ခဲ့ရင်သူ့အလုပ်အကိုင်ကဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာကိုသူမကြာခဏတွေးမိတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖွဲ့ဝင်တွေကသူနဲ့အသက်တူတဲ့သူတွေရှိတယ်။
၆။ Mino (Winner)
Mino သည် WINNER ၏အဓိကရက်ပ်ပါ၊ တေးသံရှင်နှင့်အဖွဲ့၏မျက်နှာ၊ သို့သော်သူသည်တစ်ချိန်ကအခြားအဖွဲ့တစ်ခုနှင့်ပွဲ ဦး ထွက်ရန်နီးစပ်ခဲ့သည်။ Block B! အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာသူသည် Block B ၏မူလအဖွဲ့ဝင်ငါးယောက်စာရင်းတွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့သော်လည်းသူ၏စာချုပ်ပါပြဿနာများကြောင့်သူတို့နှင့် Debuting မလုပ်ဘဲအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းအစား၎င်းသည် YG Entertainment သို့ ၀ င် ရောက်၍ Winner အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာသည်။
၇။ Subin (VICTON)
Subin သည် VICTON ၏တေးရေး၊ ရက်ပ်နှင့် maknae ။ မ ၀ င်ခင်အဲဒါကိုသင်သိပါသလား Play M Entertainmentသူက JYP Entertainment နဲ့ Cube Entertainment နှစ်ခုလုံးမှာသင်တန်းသားဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူနဲ့ပွဲ ဦး ထွက်တာဖြစ်နိုင်တယ် ပင်တဂွန်ဒါပေမယ့်အဲဒီ့အစားကုမ္ပဏီကထွက်ပြီး VICTON ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အဖြစ်တွေ့ခဲ့တယ်။
အဖွဲ့၏အဓိကတေးသံရှင် Jinho သည် SM Entertainment ၌နာမည်ကြီးသင်တန်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည်အဖွဲ့ဝင် ဦး ရေ ၁၃ ယောက်သို့ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်သူသည် EXO အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ SM Entertainment က EXO ကိုအဖွဲ့ဝင် ၁၂ ယောက်ထားရှိရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် Jin Entertainment သည် SM Entertainment အတွင်းအခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်ပွဲ ဦး ထွက်ခွင့်ရရန်နှစ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်ဟု Jinho သဘောပေါက်သည်။ ဒီအခွင့်အရေးကိုယူမယ့်အစား SM Entertainment ကနေထွက်ပြီး Cube Entertainment ကိုသွားပြီး PENTAGON ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
၉။ Shownu (MONSTA X)
Shownu သည် MONSTA X ၏ခေါင်းဆောင်၊ အဓိကအကနှင့်အဆိုတော်တေးသံရှင်ဖြစ်ပြီး GOT7 နှင့်ပွဲ ဦး ထွက်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများရှိခဲ့သည်။ သူသည် Starship Entertainment သို့မ ၀ င်မီ JYP Entertainment တွင်သင်တန်းသားတစ် ဦး အဖြစ်နာမည်ကြီးခဲ့သည်။ သူသည်ထိုအချိန်၌ JYP Entertainment တွင် GOT7 အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ရေးပျက်ကွက်မှုကြောင့်သူဟာကုမ္ပဏီမှထွက်ခွါသွားခဲ့ပြီး GOT7 အဖွဲ့ဝင်များနဲ့ယနေ့ထိတိုင်ရင်းနှီးနေဆဲပါ။
ပရိသတ်တွေက Red Velvet အဖွဲ့ရဲ့ Comeback အတွက် Red Velvet ရဲ့ main vocalist အဖြစ် Wendy ကိုမျှော်လင့်ထားလို့စိတ်လှုပ်ရှားနေပေမယ့်ဒါကဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ သူမ ဦး ဆောင်သော ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဖျော်ဖြေရေး audition တွင်သူမပါဝင်ခဲ့သည် Cube ဖျော်ဖြေရေး နှင့် Koreaboo သူမဟာပြိုင်ပွဲဝင် ၅၀၀၀ မှာနောက်ဆုံးဆန်ခါတင် ၁၅ ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်သူမဟာ Cube Entertainment နဲ့မပူးပေါင်းခဲ့ပါဘူး။ သူမသာရှိခဲ့လျှင်သူမသည်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် CLC ဆိုတာဘာလဲ။
Jin သည်အဖွဲ့၏တေးသံရှင်နှင့်အမြင်အာရုံခွဲဖြစ်သည်။ သူသည်ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်လျှင်သူ၏ဘ ၀ သည်ခြားနားစွာပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? SM Entertainment မှမန်နေဂျာတစ် ဦး သည်သူအလယ်တန်းကျောင်းတက်နေစဉ်သူ့ဆီချဉ်းကပ်လာပြီး SM Entertainment အတွက်သင်တန်းသားဖြစ်လာရန်ကင်းထောက်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူကဒါဟာလိမ်လည်မှုလို့ထင်ပြီးကမ်းလှမ်းချက်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူရှိခဲ့ရင်ဘယ်သူသိမလဲ။
နောက်ဆုံးတော့ငါတို့မှာ Wooyoung ရှိတယ်။ Wooyoung သည် KK Entertainment ၌ ATEEZ ၏ဒုတိယအငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်၊ အဓိကအက၊ အဆိုပိုင်းနှင့်အဆိုပိုင်းကိုကြည့်ရှုသူဖြစ်သည်။ သို့သော်သူနှင့်အဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်စလုံး Yeosang သူတို့နှစ် ဦး သည် BigHit Entertainment တွင်သင်တန်းမတက်မီ KQ Entertainment သို့မ ၀ င်မီ မကြာခင်မှာပွဲ ဦး ထွက်ဖို့မျှော်လင့်တယ်၊ Yeosang က BigHit Entertainment ကနေထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး Wooyoung ကသူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဦး ဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးကုမ္ပဏီမှထွက်ပြီး KQ Entertainment သို့ ၀ င်ခဲ့သည်။ သူတို့သာမရှိခဲ့ရင် TXT ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အဖြစ်ပွဲ ဦး ထွက်နိုင်လိမ့်မယ်။
Source: ပုံ (၁) နှင့် (၂)
ကျွန်ုပ်တို့၏ Youtube Channel သို့စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့် The SoK Nation ၏အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်လာပါ။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ K-Pop လက်မှတ်၊ သင်္ချာကျူရှင်၊ Tae Kwon Do အတန်းများနှင့် bulgogi မပါဝင်ပါ။
လွန်ခဲ့သော၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွက် Kpop ပရိသတ်များမဲပေးခဲ့
နောက်တစ်ခု၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှ စ၍ Spotify ၌လူကြည့်အများဆုံး K-pop သီချင်း ၃၀